कर्पोरेट « Khasokhas
उबरलाई पौने २ अर्ब डलर घाटा
राइड एप्लिेकेशन उबरलाई सन् २०१८ मा झण्डै पौने २ अर्ब डलर घाटा भएको छ । शुक्रबार सन् २०१८ को आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्दै उबरले १ दशमलव ८ बिलियन डलर घाटा
– अनिल अधिकारी बिश्वबजार उछल्ने लक्ष्य राखेका छौं, तर पहिलो सहयोग नेपालीहरुबाटै हुने आशा : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ प्रविधिसंग खेल्न जान्यो भने अबरपति होइन खबरपति भइन्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा
नेपालीहरुको नेतृत्वमा ४ बर्ष अगाडि अमेरिकाबाट सुरु गरिएको सामाजिक सञ्जाल सगुनको मूल्य चारबर्षमा १० अर्ब नेपाली रुपैया अर्थात् झण्डै १ सय मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको सगुनका सहसंस्थापक कबिन्द्र सिटौलाले जानकारी
फेसबुक सप र अमेजनमा कम्पन
पत्रकार किशोर पन्थीबाट लिखित पुस्तक कम्पन फेसबुक सप र अमेजनमा पनि उपलब्ध भएको छ । अमेरिकामा रहनेहरुले फेसबुक सप र अमेजनमार्फत कम्पनको अनलाइन अर्डर गर्नसक्नेछन् । फेसबुक सपबाट अर्डर गर्न
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वैशाख १ गतेदेखि नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कारबोर विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने निर्णय गरेका छन् । मन्त्री खतिवडाले पदवहालीका क्रममा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व दाखिला र
फेसबुकमा बिटक्वाइन लगायत क्रिप्टोकरेन्सी विज्ञापन प्रतिबन्ध
फेसबुकले बिटक्वाइन लगायतका सबै क्रिप्टोकरेन्सी विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आईसीओ, बिटक्वाइन, इथर्नम लगायतका क्रिप्टोकरेन्सी विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाइएको फेसबुकले जनाएको छ । मंगलबार एक ब्लग पोष्ट गर्दै फेसबुकले क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धित
खाने होइन त न्युयोर्कमा खसीको सेकुवा, मलेखुको माछा र चितवनको तास ?
मलेखुको माछा नखाएको कति भयो ? चितवनको तासको न्याश्रो लागेको त छैन ? यदि छ भने तपाईले अब त्यसको स्वाद न्युयोर्कमा नै पाउन सक्नुहुनेछ । न्युयोर्कको रिजउडमा रहेको रेष्टुरेण्ट ह्वाइल
– शिब भण्डारी बेलायतस्थित अल्डरशटमा सञ्चालन हुने ग्लोबल आईएमई बैंकको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन भएको छ । कृष्ण गुरुङले सन्चालन गरेको सो कार्यकममा रसमोर बरो काउन्सिलका मेयर सोफिया चौधरी , प्रमुख
क्यालिफोर्नियाको सान होजेमा खुल्यो नेपाली क्लासिक डायमण्ड स्टोर
क्यालिफोर्नियाको सान होजेमा पनि क्लासिक डायमण्डले नयाँ गहना पसल खोलेको छ । तिहारको उपलक्ष्यमा शनिवार र आइतवार ग्रयाण्ड ओपनिङ गरिएको संचालक समिर महर्जनले जानकारी दिए । काठमाडौंको न्युरोड र पुल्चोकमा
क्रेडिट र डेविट कार्डबाट पनि लगानी गर्न सकिने लण्डन । सगनुले बेलायतबाट दोस्रो चरणको शेयर निस्कासनको औपचारीक घोषणा गरेको छ । बेलायतमा रहेका नेपाली माझ एक बिशेष कार्यक्रममा शेयर निस्कासनको